Waa Sidee Cadhadaadu? ... W/Q: Kadim .M .Ali
(Hadhwanaagnews) Friday, January 12, 2018 12:50:23
Ugu dambayntii waa inaynu barano nooca cadhadeena. Kuna dadaalo inaynu noqono dad aan hore u cadhoon , haddii ay cadhoodaana , aynu noqono dad markiiba si fudud loo raaligalin karo .
1- Qof ayaa waxa uu u cadhoodhaa si
dhakso ah , laakinse wakhti badan ayay qaadata inuu ka soo noqdo cadhadaasi.
2- Qof dhakso u cadhooda laakinse cadhada hore uga soo noqda.
3- Qof ay adag tahay sida uu ku cadhoodo , haddii uu cadhoodana aan dhakso uga soo noqon.
4- Qof aan dhakso u cadhoon , haddii uu cadhoodana markaba ka soo noqda cadhadaasi.